Vanodheerera Kushungurudzwa Nevanodheererwa - Huffington Post
Posted on March 20, 2014 November 20, 2020 by csr 1687
KuNorth Carolina svondo rapfuura, mukomana akarambidzwa kutakura bhegi rangu diki rePony nekuti chaive chinhu chinokonzeresa kuti avo vanomudherera varambe vachimushungurudza. MuArkansas, nyaya yemudzidzi wepachikoro chesekondari akabviswa mubhuku regore nekuti mukuru wechikoro ainetseka ne "kugadzikana" kwake kana nyaya ikaburitswa.
Vakomana ava kuNorth Carolina neArkansas zviri pachena vari kushungurudza avo vanodheerera. Mumwe mukomana ari kutenderera achitenderera aine "girly" bhegi, nepo mumwe aine hushingi hwekuve pachena ngochani. Izvi zvinoshungurudza vanodheerera. Nezvinokonzera zvakaita seizvi pachena, vanodheerera vanovhiringidzwa nenzira isina kunaka kubva pakuwana dzidzo chaiyo.
Kutambudzwa kwevanodheerera kunofanira kumiswa nekukasira. Kubvisa zvinokonzeresa uye zvimwe zvinotsausa zvakafanira kudzima kudiwa kwevanodheerera. Ndichishandisa kufunga kwevakuru muizvi zvikoro zveNorth Carolina neArkansas, ini ndinopa mazano aya kupedzisa kushungurudzwa kuri kusangana nevanodheerera vemazuva ano:
PEDZA KUSHUNGURUDZWA KWEMABHODHI!
Ndokumbirawo uteedzere kumitemo inotevera kuchengetedza zvikoro zvedu zvakachengetekaVakomana vari vadiki pane vavanodzidza navo vechirume havafanirwe kuunza mari yemasikati kuchikoro. Kana vanodheerera vachiziva kuti vakomana vakatakura mari, panenge paine kudiwa kwakasimba kusunda vakomana vakafumuka kupinda mumaloketi kuti vade mari. Hatidi kuti vanodheerera vedu vanganikwe nemhirizhonga yemukati. Vakomana vasina kusimba vanofanirwa kuita vasina masikati.
Chinyorwa ichi chinoshandisa izwi rekutsvinya kuti riite pfungwa yezvikoro zvepamusoro uye zvimwe zvikoro kutenderera nyika zvichishungurudza vana kuti vave nechimwe chinhu chavanogona kushungurudzwa nezvazvo, ndozvazvakaita nemukomana akatakura "Bhegi Rangu Diki Diki". Isu hatibvumire kushungurudzwa uye takatumira izvi chete kuti tiwane poindi kune iyo Domenick Scudera pakutanga yaakaunza.
[btn link = "http://www.huffingtonpost.com/domenick-scudera/stop-harassing-the-bullies_b_5001844.html" color = "grey" size = "size-m" target = "_ isina chinhu"] Verenga Chinyorwa Chizere [/ btn]
Wiricheya-akasungwa mukadzi akasungwa nevechidiki muUtah